Tatuantes dia tranokalan'ny Blog Actualidad. Natokana ho an'ny tranonkalantsika tontolon'ny zavakanto, indrindra ho an'ny tombokavatsa fa koa ny fanindrohana sy endrika hafa. Manolotra endrika am-boalohany izahay raha mikasa ny hanome ny fampahalalana rehetra momba ny fomba hahazoana tatoazy, fikolokoloana ny hoditra, sns.
Ny ekipa fanontana ao Tatuantes dia misy liana amin'ny tontolon'ny tombokavatsa sy zavakanto faly mizara ny zavatra niainany sy ny fahalalany taminao. Raha te ho anisan'izany ianao dia aza misalasala manorata anay amin'ny alalan'ity taratasy ity.
Mpankafy ny fomba nentim-paharazana neo-nentin-drazana sy ny tatoazy tsy fahita firy sy freaky, tsy misy na inona na inona amin'ny sombin-tantara misy tantara tsara ao ambadik'izany. Satria tsy vitako ny manao sary sarotra kokoa noho ny saribakoly hazo, dia mila milamina aho amin'ny famakiana, ny fanoratana momba azy ireo ... ary ny famitana azy ireo, mazava ho azy. Mpitondra miavona amin'ny tatoazy enina (fomba fito). Tamin'ny fotoana nahazoako tombokavatsa voalohany dia tsy afaka nijery aho. Ny farany, natory teo amin'ny gurney aho.
Hatramin'ny naha kely ahy dia nazava aho fa ny mpampianatra dia tokony ho mpampianatra ahy, saingy ankoatry ny fahafahako manao azy ho zava-misy dia azo ampifandraisina tsara amin'ny fitiavako hafa koa izy io: manoratra momba ny tontolon'ny tombokavatsa sy fanindrohana. Satria io no fanehoana faratampon'ny fahatsiarovana sy fotoana niainana tamin'ny hoditra. Izay tonga iray dia mamerina ary lazaiko avy amin'ny traikefa izany!
Nandritra ny taona maro dia liana tamin'ny tontolon'ny tatoazy aho. Manana fomba maro sy samy hafa aho. Fomban-drazana nentim-paharazana, Maori, Japoney, sns ... Izany no antenaiko fa tianareo ny zavatra hazavaiko momba azy ireo tsirairay.
Reny tatoazy, mpampianatra fanabeazana manokana, psychopedagogue ary be fitiavana amin'ny fanoratana sy ny fifandraisana. Tiako ny tatoazy ary ankoatry ny mitafy azy ireo amin'ny vatako dia tiako ny mahita sy mianatra bebe kokoa momba azy ireo. Ny tatoazy tsirairay dia misy dikany miafina ary tantara manokana iray manontolo ... mendrika ahitanao azy.
Tena tiako ny zavatra rehetra hatao amin'ny tombokavatsa. Ireo fomba sy teknika samihafa, ny tantaran'izy ireo ... Mahafinaritra ahy izany rehetra izany, ary izany dia zavatra miseho rehefa miresaka na manoratra momba azy ireo aho.
Izaho dia olona tia fatratra tatoazy foana. Ny fahalalana momba azy ireo, ny tantara, ny fomban-drazana, ary ny fomba hikarakarako azy ireo dia fialamboly tiako. Ary zarao koa ny fahalalako mba hahafahanao mankafy azy io.
Teraka tany Barcelona aho telopolo taona lasa izay, lava loatra hahafahan'ny olona liana voajanahary sy somary tsy mitongilana mankafy mianatra momba ny tombokavatsa sy ny maha-zava-dehibe ny kolontsaina manerantany. Ary koa, efa fantatrao fa "tsy misy risika tsy mahafinaritra, tsy misy fanaintainana tsy ahazoana tombony" ... Raha te hahafantatra ny zava-drehetra momba ny tatoazy ianao dia antenaiko fa mankafy ny lahatsoratro ianao.
Ny fialam-boly tiako indrindra dia ny tombokavatsa. Amin'izao fotoana izao dia manana 4 aho (saika geeks daholo!) Ary miaraka amina fomba samihafa. Tsy misy fisalasalana fa hanohy hampitombo ny vola aho mandra-pahatapitako ny hevitra ao an-tsaiko. Ary tiako koa ny mahafantatra ny niandohana sy ny dikan'ny tatoazy.